Orinasa mitrandraka abrasives, mpamatsy - China Manufacturing abrasives
Tifitra vydia vita amin'ny vy karbonika amin'ny alàlan'ny fiempo sy famoronana. Izy io dia be mpampiasa ho toy ny abrasives ho an'ny fanadiovana, desclaing, ambonin'ny fanomanana ary fitifirana peening. Ny habeny tsy mitovy dia hamaritra ny ultiate vita vita eo ambonin'ny sehatry ny workpiece ho nipoaka.
Grit vypotika avy amin'ny tifitra vy mahery karbaona, azo alaina amin'ny karazany telo. miaraka amin'ny endrika zoro, dia ny fanesorana ireo loto mandoto sy firakotra haingana sy mandaitra.
Mitondra vy grit
Mitondra Steel Gritdia vita amin'ny fanorotoroana vy vy mitondra. Tamin'ny voalohany dia novolavolaina sy ampiasaina amin'ny indostria fanenjanana vato izy ary ankehitriny koa ekena tsara amin'ny fizotran'ny fipoahana noho ny fahombiazany.
Mandrahona ny spaonjy spaonjydia misy amin'ny karazany 20 mahery, mahazo mombamomba ny 0 ka hatramin'ny 100+ micron. Ny vovoka rehetra dia maina, vovoka ambany, fipoahana ambany.
Grit vy dia sombina vy vy zoro. Ampiasaina indrindra amin'ny fanadiovana ny tany, ny fanesorana ny loko sy ny fidorohana ny metaly tsy ferrous sy ny vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, mamolavola ny fahamendrehana eo amin'ny sehatry ny tany, ka mety indrindra amin'ny fametahana tarehy alohan'ny firakotra.
Voatifitra tariby notapahana aluminium antsoina koa hoe tifitra aluminium, vakana aluminium, granules aluminium, pellet aluminium.
Voatifitra ny tariby zinc antsoina koa zinc shot, zinc pallet, zinc beads, zinc cut-wire blasting. Malemy noho ny vy, vy tsy misy fangarony, vy na fanapahana tariby.
Oxydère alimo volontanydia mifangaro sy voadio ao anaty mari-pana ambony noho ny fangaro amin'ny baxite sy ireo akora hafa ary hafa. Izy io dia miavaka amin'ny hamafiny avo, ny hamafiny ary ny endriny amin'ny habeny.
Tifitra varahina nanapakanovokarina tamin'ny fanapahana avy tamin'ny tariby varahina ho plastika, ny halavany mitovy amin'ny savaivon'ny tariby. Antsoina koa hoetifitra varahina, fitifirana tariby varahina, fitifirana varahina ho fanapahana, vakana varahina, granula varahina sns. Azo ampiasaina amin'ny endrika voapaika na voatifitra.